Hay’ada NRC oo sheegtay in toban kun oo ruux ay ku barakaceen duqeynta diyaaradaha Droneska – Hornafrik Media Network
Hay’ada NRC oo sheegtay in toban kun oo ruux ay ku barakaceen duqeynta diyaaradaha Droneska
Hay’ada NRC ayaa sheegtay in illaa toban kun oo ruux ay ku barakaceen duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowlada Maraykanka ka geysatay deegaano ku yaal Koofurta Soomaaliya.
Madaxa hay’ada NRC ee dalka Soomaaliya Victore Moses ayaa sheegay in qoysaskan ay ka barakaceen deegaano ku yaal gobolada Sh/hoose iyo Sh/dhexe ayna gaareen xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho.
Qoysaska ku barakacay duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa badankood ah beeralay ku noolaa tuulooyin ku yaal hareeraha wabiga Shabelle mana jirto cid kaalmo dhaqaale u fidisay qoysaskaas.
Dowlada Maraykanka ayaa kordhisay duqeynta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geystaan dalka Soomaaliya waxaana duqeyntii ugu dambeysay ee toddobaadkan ay dowlada Maraykanka ku sheegtay inay ku dishay illaa boqol ka mid ah dagaalyahanada ururka Alshabaab, kuwaasoo ku sugnaa xero lagu tababaro oo ku taal deegaan ka mid ah gobolka Bay Koofurgalbeed Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku yaal xeryo ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo ka soo barakacay gobolada dalka mana jirto qorshe dadkaas barakacayaasha ah dib loogu dejinayo deegaanadii ay ka soo barakaceen.
Alshabaab Hubaysan oo Caawa Weeraray Saldhig Ciidan oo Muqdisho ku yaala.